दिनेश गौतम काठमाडाैं, २१ असार
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र चीन सरकारको संयुक्त टोलीले केही समय अगाडि गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी अनुसन्धानले दिसामा पनि कोरोना भाइरस देखिन्छ भन्ने पत्ता लगाएको थियो ।
तर, अध्ययनले ढल वा दिसामा भएको भाइरसले भन्दा पनि खोक्दा र हाँच्छयु गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने छिटाले एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दछ भनेको छ ।
काठमाडौंको ढलमा कोरोना भाइरस
नेपालमा भएको एक प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ढलमा कोरोना भाइरस भेटिएको छ । सेन्टर फर मलिकुलर डायनामिक्सका विज्ञहरूले काठमाडौंको ढलमा पनि कोरोना भाइरस रहेको पत्ता लगाएका हुन् । काठमाडौंको ४ स्थानका ढलबाट स्याम्पल लिएर परीक्षण गर्दा २ स्थानका ढलमा कोरोना भाइरस भेटिएको डा. समिरमणि दीक्षितले बताए ।
‘युरोपमा पनि सेफ्टिट्याङ्कीलाई निगरानी गर्ने गरिएको छ । ढलबाट स्याम्पल ल्याएर परीक्षण गर्दा भाइरस देखियो भने कुन घरबाट आएको ढल हो म्याप गर्न सजिलो हुने रहेछ’, उनले भने, ‘काठमाडौं पनि ठूलो शहर छ । यहाँ के रहेछ भनेर हेर्न खोजेका हौं । संक्रमण सर्ने भन्दा पनि संक्रमणको अवस्था के रहेछ भनेर हेर्न ४ ठाउँबाट नमुना ल्याएका थियौं । २ ठाउँमा कोरोना भाइरस फेला पर्‍यो ।’
प्रारम्भिक खोजीबाट समाजमा कोरोना भाइरस छ भनेर देखाएको उनले बताए । ‘समाजमा भाइरस छ छैन अन्योल भइरहेको छ । यसले के दाखायो भने समाजमा पनि छ भन्ने हो । धेरै मान्छेमा संक्रमण छ भन्ने प्रारम्भिक अध्ययन हो,’ उनले भने ।
विदेशबाट आएका व्यक्तिको दिसा ढलमा मिसिएर आएको हो वा विदेश नगएका कसैका सम्पर्कमा नरहेका व्यक्तिबाट आएको हो भन्नेमा पुष्टि नभएको उनले बताए ।
नेपालमा पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । ‘समाजमा भएको संक्रमण देखाउने रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । अब समाजमा फैलिएको छ कि, केही व्यक्तिबाट मात्र ढलमा आएको हो कि, विदेशबाट आएर बसेकाको दिसाबाट आएको हो त्यो वृहतरुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ', डा. दीक्षितले भने ।
उनका अनुसार ढलमा देखिएको भाइरस सर्ने जोखिम अत्यन्तै न्यून हुन्छ । ‘यो भाइरस शरीरभित्र बस्ने हो । बाहिर धेरै बस्न सक्दैन । पानीमा गएर यो भाइरस सर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । पानीमा सर्ने भाइरस होइन', उनले भने ।
यो अध्ययनको निष्कर्ष के हो त ?
यो अनुसन्धानबाट समुदायमा कोरोना भइरस छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै कन्टायक्ट ट्रेसिङ गर्न सजिलो, सावधानी अपनाउन र समुदायमा परीक्षण गर्नुपर्ने यो अध्ययनको निष्कर्ष हो ।
डा. दीक्षितले यो जिन सिक्वेन्सिङकै एउटा पाटो रहेको बताए । ‘७–८ जनाको टोलीले गरेको खोजी हो । पीसीआर विधिबाटै गरिएको हो', उनले भने, ‘जिन सिक्वेन्सिङकै एउटा पाटो हो ।’
ढलमा पाइएको भाइरस सर्छ कि सर्दैन ?
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका वरिष्ठ डाक्टटर शेरबहादुर पुनले ढलमा पाइएको कोरोना भाइरस रोग सार्न सक्षम छ वा छैन भन्ने प्रश्न रहेको बताए । ‘ढलमा देखिनु भनेको कुन ठाउँबाट आएको हो त्यो ठाउँमा कोरोना संक्रमण छ भन्ने हो । तर, ढलमा पाइएको कोरोना भाइरस रोग सार्न सक्षम छ पा छैन भन्ने प्रश्न छ । त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
दिसामा देखिएको भाइरसको स्रोत के हो त्यो पत्ता लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सामान्य मान्छेको दिसा हो कि ? होम क्वारेन्टाइनमा बसेकाबाट आएकाको हो ? काठमाडौं बाहिर वा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको ट्वाइलेटबाट आएको हो ? अथवा वास्तविक रूपमा बाहिर कतै नगएको मान्छेको ट्वाइलेटबाट आएको हो, त्यो अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ', उनले भने ।
समुदायमा फैलिएको भए जेष्ठ नागरिकलाई देखिनु पर्ने हो तर अहिलेसम्म ज्येष्ठ नागरिकलाई असर नदेखिएको उनले बताए । ‘समुदायमा फैलिएको भए वृद्धवृद्धालाई देखिनु पर्ने हो । त्यो देखिएको छैन । त्यो देखियो भने समुदायमा भाइरस गएको हुन्छ । यो अध्ययनले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई भने सहज बनाउँछ', उनले भने ।
सराकारको नीति विपरीत अनुसन्धान
कोरोना भाइरस परीक्षणको लागि सरकारले केही निजी प्रयोगशालालाई पनि अनुमति दिएको छ । तर, सेन्टर फर मलिकुलर डायनामिक्सलाई सरकारले अनुमति दिएको छैन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यो संस्थाले एप्लाइ नै गरेको छैन । डब्लूएचओले दिसा पिसाबमा पाइँदैन भनेको छ भने नेपला सरकारले डेथ बडीमा पाउँदैन भनिसक्यो । दिसा पिसबामा नपाउने पानीमा कसरी पाइन्छ', ती कर्मचारीले भने ।
अनुसन्धानको अनुमति लिएको छैन
अनुसन्धानको लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । तर, सेन्टर फर मलिकुलर डायनामिक्सले परिषद्बाट स्वीकृत नलिएको पाइएको छ । परिषद्का अनुसन्धान प्रमुख डा. मेघनाथ धिमालले भने, ‘हामीसँग स्वीकृित लिएर गरेको अनुसन्धान होइन । के गरेको हो उहाँहरूसँग बुझ्दै छौं ।’
राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट स्वीकृति नलिई विदेशमा लगेर पहिलो संक्रमितको जिन सिक्वेन्सिङ गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रूना झासहित ६ जनासँग परिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । डा. झासहित प्रयोगशालाकै डा. रञ्जित साह र हेमन्त ओझा, रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. बासुदेव पाण्डे, पूर्वनिर्देशक विवेकलाल कर्ण र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक अनुप बास्तोलालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
राज्यसँग मिलेर काम गर्छौं
डा. दीक्षितले कोरोनाको अनुसन्धान नेपालमै गर्न सम्भव रहेकाले राज्यसँग मिलेर काम गर्ने बताए । ‘सेन्टर फर मलिकुलर डायनामिक्सले १३ वर्ष भयो अनुसन्धान गरेको, अन्य देशका वैज्ञानिकसँग मिलेर अनुसन्धान गर्दै आएका छौँ । हैजा, स्वाइन फ्ल्लू पनि अनुसन्धान गरेका छौं', उनले भने, ‘कोरोनाको पनि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, इपिमिडियोलोजी र डब्लूएचओसँग मिलेर हामी काम गर्न तयार छौँ। उहाँहरूसँग कुरा अगाडि बढेको छ ।’
भिडियाे साैजन्य : सेन्टर फर मलिकुलर डायनामिक्स
प्रकाशित मिति: आइतबार, २१ असार २०७७, ०६:५१:००